I-China Custom Logo Sleeve Women'S Hoodie PY-WW003 Ukukhiqiza kanye nefektri | I-Pinyang
Ihembe eliqinile labesilisa nabesifazane izithandani ijezi ngokwezifiso ephrintiwe i-logo hoodie
Hlobo luni lwendwangu ongayikhetha yokwenza ngokwezifiso ijezi lasebusika? Ulwazi lwendwangu eyenziwe ngezifiso yeHoodie
KuHoodie eyenziwe ngezifiso, kunezindwangu ezahlukahlukene esingakhetha kuzo emakethe, kepha yiluphi uhlobo lwendwangu yeHoodie edonsa kakhulu izithukuthuku futhi ephefumula kalula? Ukwenza ngokwezifiso kweT Club kuzokuthatha ukuthi uqonde isimo sezindwangu zeHoodie emakethe.
Indwangu eyenziwe ngokwezifiso yejezi - indwangu ye-cashmere
ICashmere uqobo ayilona igama elijwayelekile, kepha igama elisetshenziswa kakhulu kumabhizinisi. Isizathu sokuthi kungani ibizwa ngokuthi yi-cashmere ukuthi iyi-cashmere yokufakelwa, ngakho-ke ibizwa nge-cashmere, hhayi izinwele zewundlu. ICashmere ayibizi njengezinwele zewundlu, kepha inomphumela omuhle wokushisa, hhayi ngaphansi kwezinwele zewundlu. Ngakho-ke, isetshenziswa kabanzi embonini yezingubo. Kukhethwa ngabasebenzisi abaningi ukwenza ngokwezifiso i-Hoodie. Kuyimfashini futhi ukufudumala.
Indwangu yenkambiso yengubo - indwangu ehlanzekile yekotini
Ukotini omsulwa wenziwe ngentambo kakotini. I-Cotton fiber ine-hygroscopicity enhle, umsebenzi omuhle kakhulu wokupholisa, ingamunca izithukuthuku futhi yenze isikhumba sibe esisha. Izingubo ezenziwe ngokotini omsulwa zithambile kakhulu futhi zikhululekile. Izindwangu zikakotini ezimsulwa zivame ukoma ukuthintwa, zikhanye ngesisindo, futhi zibe nokungena komoya okungcono. Bazizwa bepholile emzimbeni futhi bakulungele ukwenza izingubo zasehlobo. Kodwa-ke, izindwangu zikakotini ezimsulwa zinenye yezinzuzo ezinkulu kakhulu, okungukuthi, ukumuncwa izithukuthuku nokungena komoya. Okuwukuphela kokubi ukuthi kulula ukushwabana.
Indwangu eyenziwe ngokwezifiso yejezi - uboya obuyi-polar
Uboya bePolar luhlobo lwendwangu eboshwe. Kuyisakhiwo esincane se-Yuanbao eselukiwe, esilukiwe emshinini omkhulu oyindilinga. Ngemuva kokuluka, indwangu empunga idayiwe kuqala, bese icutshungulwa ngezinqubo ezahlukahlukene eziyinkimbinkimbi zokuqedela njengokulala, ukufaka amakhadi, ukugunda nokuthwebula. Uhlangothi lwangaphambili lwendwangu lubhulashiwe, futhi okusanhlamvu okunyakazayo kuyaphaphatheka futhi kuminyene, futhi akulula ukukhipha uboya nokupenda, kanti uhlangothi lwangemuva lincane futhi luye, i-Short villi, ukuthungwa okucacile nokunwebeka okuluhlaza. Izithako zalo ngokuvamile ziyi-polyester, imizwa ethambile.
Izinhlobo ezingenhla ezintathu zezindwangu ze-Hoodie zingumjuluko ongcono wokumunca nezindwangu eziphefumulelwa ama-hoodi enziwe ngokwezifiso; ukuthola eminye imininingwane mayelana nokukhethwa kwendwangu yama-hoodies enziwe ngokwezifiso nabangane bama-hoodies enziwe ngezifiso, sicela uxhumane nokwezifiso zamakhasimende ezenziwa ku-inthanethi online.
Ijezi elenziwe ngomzimba elenziwe nge-fiber elingu-50% ne-50% kakotini. Kuyinto imibimbi ukumelana futhi ukugqoka nemithi. It has kuyaqina okuhle futhi ukuzinza ntathu. Akulula ukukhipha ugesi no-static. Izindwangu ezihlanganisiwe, iyindwangu ejiyile kakhulu, ehlanganisiwe. Ingagqokwa ngabesilisa nabesifazane. Ungenza ngokwezifiso iphethini, umbala kanye nelogo.
Uhlobo Lokunikezela: Insiza ye-OEM Indawo Yomsuka: Jiangxi, China
Igama lomkhiqizo: Inombolo Yemodeli ye-PINGYANGYU: PY-WW003
Uhlobo lwendwangu: Isici sokuhlanganiswa kukakotini: UKUSHA OKUSHESHAYO, Ukuphikisa, Ukulwa, ngaphandle kwe-cap
Izinto: 50% Polyester，Ama-50% Technics Technics: Ephrintiwe
Idizayini: Isikhathi Esilayiniwe: Ekwindla
Isitayela: Ubude Bokugqoka Okuvamile: Uhlobo Abanye Iphethini: Isitayela Somkhono Oqinile: Abanye
Ikhola: Isisindo se-V-neck: 350g
Ubude beSleeve (cm): Isikhathi sokuhola sesampula sezinsuku ezi-7 ezigcwele: Ukusekelwa
Igama lomkhiqizo: I-sweatshirt ye-v-neck evulekile ngokwezifiso Uhlobo lomkhiqizo: I-sweatshirt yabesifazane
Amagama agqamile: Abesifazane besiketi abakhulu ngokweqile Ubulili: Abesifazane Bentombazane Yabesifazane
Ilogo: Ngokwezifiso Uhlobo Lokuphrinta Lwe-logo: Causal Wear
Into: Usayizi Wokwezifiso Wensizakalo ye-OEM: Usayizi Wokwezifiso
Isevisi: Incazelo ye-OEM ODM yangokwezifiso: Imiklamo eyenziwe ngokwezifiso
A: Yebo, i-Customaker Creations yethu inesipiliyoni seminyaka engaphezu kwengu-5 isebenza nezimakethe zemfashini zase-Europe nezaseMelika enqubeni yokuklama, ukuthuthukisa kanye nokukhiqiza.
Q: Cishe usayizi nombala.
A: Yamukela ukwenza ngokwezifiso.
A: Ukukhiqizwa okuncane: izinsuku ezingama-5-7 Ukukhiqizwa kweMisa: 7-15days noma kusekelwe ku-qty yakho.
A: Imikhiqizo emihle kakhulu (idizayini eyingqayizivele, umshini wokuphrinta kusengaphambili, ukulawula ikhwalithi okuqinile) Ifektri
ukuthengiswa okuqondile (intengo evumayo nencintisanayo) Insizakalo enhle (i-OEM, i-ODM, izinsizakalo zangemuva, ukulethwa okusheshayo) Ukubonisana ngebhizinisi lobuchwepheshe.
Langaphambilini Umbala Wokwezifiso Ilogo Rew Neck Women Sweatshirt PY-WH001
Olandelayo: I-Drawstring Thicken Long Sleeve Women'S Hoodie PY-WW004
Okuxekethile Futhi Okunhlobonhlobo Splicing Mid-Length Women H ...
Ukuphrinta Okuxekethile Okujwayelekile Kwentwasahlobo Abesifazane Hoodie PY-WW002
Drawstring Thicken Long sleeve se Abesifazane'S Ho ...